Uhlaziyo luka-Okthobha ukhuseleko lweGlass Qaphela 8 ngoku iyafumaneka | I-Androidsis
Kwiminyaka yakutshanje sibonile indlela iingxaki zokhuseleko ze-Android ezonyuke kakhulu, enyanzele abavelisi abohlukeneyo ukuba nikela inkqubo yokuhlaziya yenyanga Ukuze ikhusele abathengi bayo ngalo lonke ixesha phambi kwezisongelo kunye nokuba sesichengeni okufunyanwa inyanga nenyanga.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, umenzi uhlaziye iitheminali zakhe rhoqo ngenyanga kwakungacingeki, kodwa ngenxa yokuba i-Android yeyona nkqubo isetyenziswayo ehlabathini, kuyinto eqhelekileyo ukuba ibe yinto yeetshomi kunabanye, abahlobo abazama ngokuqhubekayo ukufumana ubungozi obutsha ukuze babaxhaphaze.
Kucacile ukuba kuninzi, kunenzuzo ngakumbi ukuxhaphaza ubuthathaka kunokuba uxele ngqo kuGoogle, ngaphandle kwento yokuba inani elinikezelwa lolu hlobo lolwazi lonyuka ngakumbi ngonyaka. Isamsung, ngaphakathi kuluhlu oluphezulu, inika uhlaziyo lokhuseleko kuzo zonke izixhobo zalo ubuncinci iminyaka emibini. Isiphelo sokugqibela esisandula kufumana uhlaziyo lokhuseleko lwenyanga ka-Okthobha yiGlass Qaphela 8.
Uhlaziyo lokugqibela olufunyenwe sesi sixhobo lusinike ithuba lokuba irekhodi ngokuhamba kancinci Ukongeza ekusivumeleni ukuba senze i-AR Emoji, ngokwandisa inani lezixhobo apho lo msebenzi ufumaneka khona (Qaphela i-9 kunye ne-S9 kunye ne-S9 +). Nangona kunjalo, olu hlaziyo lutsha lokhuseleko alusiniki nanye extra.
Le firmware intsha izisa indawo yokuphepha yenyanga ka-Okthobha, iphethe ikhowudi I-N950FXXS5CRJ1 kwaye sele ikhona kwamanye amazwe aseYurophu anje EJamani, e-Itali naseNetherlands, Ke ngumcimbi weeyure ngaphambi kokuba ufikelele kwamanye amazwe apho le ndawo ithengisiweyo, kwaye iyaqhubeka nokuthengiswa.
Ukuhlaziya isixhobo sethu kufuneka siye kuHlaziyo lweSoftware ngaphakathi kwiiSetinal Useto. Ukuba ayikafumaneki okwangoku, unako khuphela uhlaziyo ngabafana eSamMobile en eli khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uhlaziyo luka-Okthobha ukhuseleko lweGalaxy Note 8 ngoku iyafumaneka
Ukungapheliyo nangaphaya kwecosmobot arcade